सुहाना र मलिकाले दर्शकको मन जित्लान् ? - Narayanionline.com Narayanionline.com सुहाना र मलिकाले दर्शकको मन जित्लान् ? - Narayanionline.com
काठमाडौं – भोलि शुक्रबारदेखि दुई फिल्म ‘यात्रा’ र ‘ए मेरो हजुर ३’ रिलिज हुँदैछन् । दुवै फिल्मले दर्शकमाझ एक किसिमको क्रेज बनाउन सफल भएका छन् । फिल्मका कारण युवापुस्तामाझ लोकप्रिय दुई अभिनेता अनमोल केसी र सलिनमान बनियाको राम्रो चर्चा छ ।
अर्कातिर दुई फिल्ममा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका डेब्यु नायिका सुहाना थापा र मलिका महतको पनि चर्चा छ । दर्शकमाझ रिलिजअघि राम्रो छाप छोडेका छन् । यी दुवै नायिकाका लागि दुवै डेब्यु फिल्म हुन् । तर, के यी दुई क्युट गर्लले फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो छाप छाड्लान् ?धेरैलाई लागिरहेको छ ।
झरना थापाकी छोरी सुहाना थापाले आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्मबाट डेब्यु गर्दैछिन् । यो फिल्म सुहानाका लागि विशेष फिल्म पनि हो ।
इन्स्टाग्राममा तस्वीरहरु अपलोड गर्ने मलिकाको ‘क्युटनेस’को फिल्म क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ । अभिनय कस्तो गरेकी छिन्, त्यसअनुसार मलिकाको करिअर फिल्म क्षेत्रमा बन्दै जाने पक्का छ । सानैदेखि फिल्म अभिनयप्रति झुकाव राख्ने मलिकालाई यो फिल्मबाट अपेक्षा भने ठूलै छ ।
ट्रेलर र गीतबाट राम्रै प्रतिक्रिया पाएका यी दुई नायिकाले फिल्ममा आफूहरुले राम्रो अभिनय गरेको बताउँदै आइरहेका छन् । अब अभिनय कस्तो गरेका छन्, र अगाडिको फिल्मी करिअर कस्तो बन्दै जाला भन्ने त दर्शकले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । दुवै फिल्मको दर्शकमा भने राम्रै अपेक्षा छ ।
मलिका महत ।
पप गायक विजय लामाको नयाँ गीत ‘नलाउ भन्छु माया’ सार्वजनिक